प्रदेशको राजधानी इटहरी नै बनाउँछु : हेमकर्ण - itaharinews
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ०४, २०७४ समय: १५:५६:१६
प्रदेश नम्वर एकका चर्चित युवा नेता हेमकर्ण पौडेल सुनसरी क्षेत्रनम्वर २ को क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्दै छन । प्रदेश नम्वर एकको राजधानी इटहरीलाई बनाउँन लामो समय देखि वहष र पहल गदै आएका पौडेल यस क्षेत्रका चर्चित र प्रभावशाली युवा नेता हुन । बि।स २०३५ साल साउन ५ गते झापा कोरोबारीमा जन्मेका हेमकर्ण पौडेल चर्चित युवा राजनीतिज्ञ हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला ११ बर्से पौडेल पञ्चायतरिुद्ध सडकमा उर्लिएको जनसागरको एउटा अङ्गका रूपमा देखापरेका थिए । किशोर उमेरमै उनले गर्ने भाषण कलाको खुब चर्चा हुने गथ्र्यो । स्पष्टावक्ता, साना–ठुला सबै उमेर समूहमा भिज्न सक्ने पौडेलको लोकप्रियता दिनहुँ बढिरहेको छ । उनलाई स्थानीय समाजले जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामीका रूपमा सधैँ नजिक पाउने गरेको छ ।विशेषगरी जुझारु र जनपक्षीय नेतृत्वको छवि बनाएका पौडेल आसन्न निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ ‘क’मा प्रदेशसभा उम्मेदवार बनेका छन् । पढ्न नपाएका बालबालिकादेखि उपचार नपाएका बिरामीसम्म सहयोगी हात बढाएका पौडेललाई मत दिनु भनेको लोकतान्त्रिक आस्थाको सम्मान मात्र होइन, एउटा निरन्तर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उठेको, दिनरात जनताकै घरदैलोमा भेटिने युवालाई काम गरेर देखाउने अवसर दिनु पनि हो । २०५५ सालमा जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीको स्वबियु सभापति,तरुण दल सुनसरीको सचिब,नेपाल बिद्यार्थी संघ सुनसरीको सचिब,पार्टीको क्षेत्रीय सदस्य हुादै २ कार्यकाल इटहरीको नगर सभापति भईसकेका हेमकर्ण राजनीतिक संयन्त्र इटहरीका प्रभावशाली सदस्य, विपद् व्यवस्थापन समिति इटहरीको संयोजक समेत हुन । इटहरीलाई महानगर र प्रदेशिक राजधानी एक घर एक रोजगार , सेरा खोलाको बाढीको स्थायी नियन्त्रण , तालतलैयामा राष्ट्रियस्तरको चिडियाखाना निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिएका उनी सँग गरीएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
चुनाव उठ्दै हुनुहुन्छ के छ अवस्था ?
नेपाली काग्रेस पार्टीले टिकट दिए लगातै चुनावको तयारी म र मेरो पार्टीले गरीरहेको छ । गाउँका गरीव देखि शहरका धनाढ्यहरुको समेत माया पाएको छु । यसपालीका चुनावमा मेरा लागी सयौ युवाहरु मलाई जिताउँन लागेका छन त्यस कारण मेरो अवस्था राम्रो छ । मलाई धेरैले माया देखाएका छन ।
तपाई बढी युवाहरुलाई प्रथामिकता दिनु हुन्छ किन रु
युवा भविष्यका राजनितिज्ञ मात्र हैन यो देशका कर्णदार हुन । म युवाहरुलाई प्रयोग हैन समाजमा उदाहरणिय बनाउँन चाहान्छु । युवाहरुलाई चुनावको बेला मात्र हिडाउँने पार्टीहरु प्रति मेरो आपत्ती छ । युवाहरुलाई सहि बाटोमा हिडाउँन सके समाज र देश विकास हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यस कारण अलि बढि युवाहरुलाई प्रथामिकता दिन्छु । राजनितिमा युवा नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
म यो चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु । मैले इटहरीको विकासका लागी औरात्र खटेको छु । इटहरीका हरेक जनता सँग मेरो सम्वन्ध छ । प्रत्येक टोलका बाटाघाटो सँग म जोडिएको छु । यहाँका आमा दाजुभाई दिदि बहिनिहरुले मलाई माया गरेका छन । त्यो नै मेरो चुनाव जित्ने मख्य मुख्य आधार हो । यहाँका जनताले देखाएको माया नै मेरो लागी चुनाव जित्ने आधार हुन र पक्का यो चुनाव जित्दै छु ।
तपाईको चुनाब जित्ने मुख्य आधार के हो ?
मैले मेरो क्षेत्रमा चुनाव जित्ने आधार भनेकै जनमत हो । मेरो पक्षमा देखिएको जनमतको आधारमा मैले चुनाव जित्ने दावी गरेको हुँ । म चुनाव जित्नका लागी मात्र चुनावी मौदानमा आएको हैन । यहाँका अल्पसंख्यक,आदीवासी जनजाती,गरीव,पिछडावर्गका जनताहरुको भावना बुझ्न र उनीहरुको जिवनस्तर बढाउँन पनि मेरो उम्मेदवारी हो । म चुनाव जितेर यहाँका जनताको पक्षमा काम गर्नेको लागी चुनावी मौदानमा आएको हुँ । मलाई इटहरी तथा रामधुनीका जनताले माया गर्छन भन्ने विश्वास छ । म सबैको घर आगनमा परिचित ब्यक्ति पनि हो ।
चुनाव जितेर के गर्नु हुन्छ ?
मैले प्रदेशसभाको चुनाव जिते पछि इटहरीमा जादु गर्छु भनेर झुटो आश्वसन दिन्न । मैले चुनाव जिते लगातै प्रदेश नम्वर एकको प्रादेशिक राजधानी इटहरीलाई बनाउँन मेरो महत्वपूर्ण भुमिका हुनेछ । इटहरीलाई कुनै हालतमा इटहरीलाई राजधानी बनाउँने अभियान हो । म चुनाव नै नजिते पनि इटहरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँन कुनै कन्चुस्याई हुने छैन । त्यो सँग इटहरीका बाटोे घाटो निमार्ण र पर्यटकिय क्षेत्र विकासको लागी मेरो पहल रहने छ । इटहरीका हरेक गतिविधिमा मेरो सहभागीता हुने छ ।
सामाजिक सञ्जालमा तपाई लोकप्रिय हुनुको कारण ?
राजनितिक रुपमा मात्र हैन सामाजिक कार्यमा समेत मेरो सहभागीता छ । मेरो काम देखेर सयौ युवा आमा दिदि बहिनि,दाजुभाईहरुले मलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत माया देखाएका छन त्यसमा म असाध्यै खुसी छु । काग्रेसमा मात्र हैन एमाले माओवादी लिम्वुवान फोरम,राप्रपा लगायका इटहरीमा राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरुले पनि मलाई भोट दिने छन । समाज वदल्न युवाहरुको भुमिका अपरिहार्य छ । सामाजिक काम गर्दा म कुनै पार्टी नभनी जनताको काममा औरात्र खट्ने गर्छु त्यस कारण पनि मलाई साथीभाईहरुले माया गरेका छन ।मेरो सम्पती पनि यहि हो ।
अन्तिममा केहि भन्नु छ ?
अन्तिममा मेरो क्षेत्रका बासीन्दालाई मात्र हैन । सम्पूर्ण इटहरीवासीलाई मलाई मतदान गरी विजय गराईदिन पहल गरीदिनु हुन अनुरोध गर्छु । जनता सबै भन्दा शक्ति हुन । उहाँहरुले मत दिनु भएन भने मेरो जित नहुन सक्छ तसर्थ मलाई विजय गराउँन इटहरीवासी र रामधुनीबासीको महत्वपूर्ण योगदान रहने छ । मलाई तपाईको अमुल्य मत दिएर विजयी गराउँनु होस भन्न चाहान्छु ।